San Pedro de Alcántara, harena ao amin'ny Costa del Sol | Fitsangatsanganana tanteraka
Fitsangatsanganana tanteraka | | España
Any akaikin'ny Marbella cosmopolitan i San Pedro de Alcántara dia maneho ny mifanohitra amin'izany, izany hoe, ny fiadanan'ny tanàna espaniola mahazatra. Vao tsy ela akory izay ny fototra iorenany, satria teraka tamin'ny maha zanatany fambolena azy teny an-tanan'ny Marquis del Duero tamin'ny 1860 izy, izay iray amin'ireo nandroso indrindra tamin'ny androny.
Amin'izao fotoana izao, ny tanànan'i Malaga dia miavaka amin'ny trano fotsy sy manana ny serivisy mahazatra rehetra amin'ny mponina maherin'ny dimy arivo sy telo alina. Na izany aza, na dia dimam-polo amby zato taona lasa aza no nananganana azy dia manome tsangambato tena mahaliana anao sy manodidina anao koa izy io hankafy ny natiora.
1 Inona no ho hita any San Pedro de Alcántara
1.1 Paleo-Christian basilica an'ny Vega del Mar
1.2 Fandroana romana an'ny Las Bóvedas
1.3 Fiangonan'i San Pedro de Alcántara
1.4 Villa misy an'i San Luis
1.6 Ilay mpisotro toaka
2 Zavatra tokony hatao any San Pedro de Alcántara
3 Ny toetrandro any San Pedro de Alcántara
4 Inona no hohanina any San Pedro de Alcántara
Inona no ho hita any San Pedro de Alcántara
Ny mponina ao Malaga dia manana toerana maro izay tsy maintsy tsidihinao, avy tavela arkeolojika paleochristian sy romana amin'ireo trano izay ao anatin'ny lova arsitektur indostrialy. Ary koa tsangambato hafa tena mahaliana.
Paleo-Christian basilica an'ny Vega del Mar
Ho hitanao ireo taolam-paty ireo eo am-bavan'ny Reniranon'i Guadalmina, amin'ilay faritra nandalovan'ilay lalana Roman Herculean, izay nampifandray Cadix ary Cartagena. Amin'izao fotoana izao, ny drafitry ny basilica dia zara raha voatahiry, mampiseho vatana telo naves apses roa mifanohitra. Naorina teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX taorian'i JK izy io ary heverina fa anisan'ny tanànan'i Cilnian, izay misy azy, na izany aza, tsy misy porofo.
Nisy koa neropropolis tany. Etsy ankilany, ny lova rehetra izay hita niaraka tamin'ireto taolam-paty ireto (vatosoa, sambo, firavaka ary entana fasana) dia ao amin'ny National Archaeological Museum of Madrid. Ny basilica dia Tsangambato ara-tantara avy amin'ny 1931.
Fandroana romana an'ny Las Bóvedas
Azonao atao ny manararaotra mitsidika azy ireo rehefa mankany amin'ny basilica ianao, satria zato metatra eo ho eo fotsiny izy ireo. Izy io dia tranobe iray misy efamira, misy efitrano valo manodidina ny efitrano afovoany, ary eo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX aorian'i Kristy.
Niorina tamin'ny beton mahery izy io ka nahatanty tsara ny fitsapana ny fotoana. Ankoatr'izay, manana ny mampiavaka azy izy io fa ny valiny dia voaravaka. Hatramin'ny taona 1936 dia tsangambato nasionaly ary hatramin'ny 2007 Fananana tombotsoan'ny kolotsaina.
Etsy ankilany, eo akaikin'ny loharano mafana no ahitanao a tilikambo fanilo Niorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX ho ampahany amin'ny tilikambo fiambenana izay mifehy ny fahatongavan'ireo jiolahin-tsambo avy any Afrika Avaratra eny amorontsiraka. Telo ambin'ny folo metatra ny haavony ary valo ny savaivony.
Fiangonan'i San Pedro de Alcántara
Nosokafana tamin'ny 1869, mamaly izany fanjanahan-tany ary manana façade hafahafa miaraka amina tilikambo miendrika prisma mampatsiahy ny Portichuelo de Antequera izy. Izy io dia manana drafitra basilika ary iray amin'ireo trano vitsivitsy sisa tavela tamin'ny zanatany fambolena tany am-boalohany izay nahatonga ny mponina ankehitriny.
Villa misy an'i San Luis
Ny fananganana azy dia nanomboka ny taona 1887 ho trano ho an'ny fianakavian'i Cuadra Raoul, izay nahazo ny fananana ny zanatany tamin'ny 1874. Mahaliana izany satria tsy misy ifandraisany amin'ny fomba Andalosiana. Fa kosa mamaly frantsay tamin'io fotoana io. Manana drafitra gorodona mahitsizoro sy haavo telo izy. Voatsipika ny tampon-trano ary ao ambaniny misy trano fatoriana telo tsy voaravaka. Ho hitanao mora foana ity trano ity satria ny toeran'ny Biraon'ny Ben'ny tanàna izao.
Ankoatry ny taolan'ny arkeolojika izay nohazavainay taminao, ity angamba no fananganana tranainy indrindra any San Pedro de Alcántara, hatramin'ny nananganana azy talohan'ny nananganana ny zanatany. Raha ny tena manokana dia nanomboka tamin'ny 1823 izy io ary ny asany dia ny fanaovana siramamy. Na izany aza dia natokana ho an'ny modely tantsaha, sekoly ho an'ireo mpiantoka fambolena izay mpisava lalana manerana an'i Espana.
Tokony holazaina fa amin'ity faritra ity dia novolena izy io siramamy nandritra ny taonjato maro satria izy dia iray amin'ireo toerana vitsy any Eropa izay misy ny fepetra mety hivoatra an'io zavamaniry io. Androany dia ho hitanao amin'ity trano ity ny ivon-kolontsaina.
Ilay mpisotro toaka
Satria be dia be ny siramamy tao amin'io faritra io, dia natsangan'ny zanatany io distillery io tamin'ny 1871. Raha ny marina, dia vita amin'ny brandy avy amin'ny moleta manokana an'io akora io izy. Ny trano dia misy navea mahitsizoro sy tilikambo avo kokoa. Fa, ambonin'izany rehetra izany lafin-trano ivelany, voaravaka sisin-tany amin'ny taila fotsy sy manga ary koa fanamaivanana hafa.
Zavatra tokony hatao any San Pedro de Alcántara
Ny tanànan'i Malaga dia manana tsara tarehy tora-pasika izay ahafahanao mankafy ny masoandro sy ny ranomasina. Toy izany koa, misy a Toerana fitsangantsanganana efa ho efatra kilometatra ny halavany izay mifandray amin'i Puerto Banús ary ao no ahitanao bara sy trano fisakafoanana maro miaraka amina sary mihetsika be.
Fa, raha tianao ny mandeha dia azonao atao ihany koa ny manaraka ny Boulevard na amin'ny Parque de los Tres Jardines. Ary ambonin'izany rehetra izany dia manana ianao làlana fitsangantsanganana mahatalanjona any Sierra Blanca. Ohatra, ilay miakatra any amin'ny Cruz de Juanar, efa ho XNUMX XNUMX metatra ny haavony, ary ilay iray miakatra amin'ny tampon'ny La Concha.
Ny toetrandro any San Pedro de Alcántara
Samy manana ny tanàna sy ny faritra Marbella iray manontolo toetr'andro mediterantany subtropika, miaraka amin'ny ririnina sy fahavaratra mafana be. Kely dia kely ny haavon'ny tany ary manodidina ny valo ambin'ny folo degre eo ho eo ny maripana isan-taona. Amin'ny lafiny iray, ny ora tara-pahazavana amin'ny taona iray dia saika mahatratra telo arivo. Noho izany, tsara ny fotoana rehetra hitsidihanao ny tanànan'i Malaga, na dia ny volana tsara indrindra aza dia an'ny jona sy septambra, rehefa tsara ny andro fa tsy mafana toa ny volana jolay na aogositra.
Inona no hohanina any San Pedro de Alcántara
Ny gastronomy amin'ity faritra ity dia tsy mitovy amin'ny an'ny Costa del Sol sisa. Amin'ny maha morontsiraka azy dia miorina amin'ny trondro vaovao. Mikasika ny fanomanana azy dia misy lovia roa mahazatra izay tsy maintsy andramanao. Ny iray dia ny "trondro nendasina, izay maka ny anchovy, mackerel soavaly ary ny mullet mena mihitsy aza ho fitaovana manta. Ary ny iray hafa totozy sardinina, izay voaomana amin'ny alàlan'ny fampidirana azy ireo amin'ny tsora-kazo sy atono azy ireo amin'ny afo.
Gazpacho dia lovia eo an-toerana ihany koa, ny salmorejo ary ny ajoblanco. Ity farany dia lasopy mangatsiaka misy rano, menaka oliva, tongolo lay, sira, mofo ary amandy. Indraindray misy vinaingitra koa ampiana ao aminy ary mazàna dia hanina miaraka amin'ny tapa-melona na voaloboka. Raha ny momba ny zava-mamy, dia mila manandrana ireo mofomamy misy menaka sy borrachuelos ary divay misy divay ianao.
Etsy ankilany, ao amin'ny tanànan'i Malaga dia misy a trano fisakafoanana marobe tsy vitan'ny manolotra sakafo nahandro eo an-toerana ihany ianao Azonao atao ihany koa ny manandrana ny nahandro iraisam-pirenena sy ny lovia mifototra amin'ny gastronomy maoderina indrindra.
Ho famaranana, betsaka ny zavatra azon'i San Pedro de Alcántara hatolotra anao. Tsy tokony hotadiavinao ny fotoana hitsidihana ity toerana mahafinaritra any Malaga ity. Tsy misy tokony hampihemotra ireo tanàna malaza hafa any Costa del Sol toa an'i Mijas, nerja, Fuengirola, Benalmádena na Torremolinos.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » San Pedro de Alcantara
Fidirana ao Vatican
Niagara Falls Tour avy any New York